Qaar ka mid ah ergadii shirka Garowe oo qaadacay qodobo ka mid ah go’aanadii ka soo baxay | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Uncategorized Qaar ka mid ah ergadii shirka Garowe oo qaadacay qodobo ka mid...
Qaar ka mid ah ergadii shirka Garowe oo qaadacay qodobo ka mid ah go’aanadii ka soo baxay
Iyadoo dhowaan magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal lagu soo gabagabeeyay shirka wada tashiga aayaha Puntland ayaa waxaa durba qaadacay qaar ka mid ah ergadii shirkaasi ka qeyb gashay.
Shirka oo ay ka soo qeyb galeen wufuudii ugu badneyd ee isaga kala yimid dalka gudihiisa iyo dibadiisa, waxaana ka mid ahaa xubnihii ugu cadcadaa Cumar Cabdi Rashiid oo laba goor noqday Ra’iisal Wasaare, Xildhibaan C/raxmaan Faroole iyo xubno kale.
Xubnaha qaaday go’aanadii shirka Garowe waxaa ka mifd ah Wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka Axmed Ciise Cawad, Cabdi Faarax Juxa iyo xubno kale oo degaan doorashadoodu tahay Puntland.
“Waxaan diidanahay go’aamada lagu sheegay warmurtiyeedka shirka Garowe ka soo baxay” ayuu yiri Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo sheegay in hadal jeedintii shirka ay gef ku tahay dowlad goboleedyada kale ee dalka.
Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay inuu bogaadinayo qabsoomidda shirka wada tashiga ah ee mudada saddexda maalin ah socday, gaar ahaan qodobadii tilmaamayay midnimada iyo horumarka, isagoona sheegay in sidoo kale uu taageerayo socdaal madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ku tegayo magaalada Muqdisho.
Wasiir Cawad ayaa sheegay inuu rajeynayo kulanka madaxda Soomaalida ay ku yeelanayaan magaalada Muqdisho, wuxuuna inuu ku soo dhammaado is faham iyo guul.